Kuedza kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7 | IPhone nhau
Vazhinji venyu muchatova neiyo nyowani iPhone 7 mumaoko enyu, vamwe vachazove nayo munzira, uye vamwe vazhinji vachamirira ona zvese zviyedzo zviri kuburitswa netiweki nezve mashandiro uye hunhu hweiyo nyowani iPhone 7. Uye ndiyo iyo iyo hype Mumazuva ekutanga aya akasimba uye tese tinoda kuziva kuti vashandisi vemumigwagwa vanofungei nezvemidziyo yavo mitsva.
Uye kana paine chimwe chinhu chiri kunetseka chaizvo, inguva yekunyudza iyo iPhone 7 mumvura. Apple inotaura kuti iyo nyowani iPhone 7 inoshingirira kuputika uye kunyudzwa kudiki mumvura. Iwe unotsunga kugeza neyako nyowani iPhone 7?Iwe unoda kuziva mhedzisiro iyo vamwe vashandisi vakave nayo? Mushure mekusvetuka tinokuratidza kuyedzwa nemidziyo yakasiyana ...
Sezvawaona, iPhone 7 haina mvura uye inoonekwa mushure mekuiswa kune edza kuinyudza mumvura, muto weorenji, uye kofi. Zvinwiwa zvakasiyana zvine kusimba kwakasiyana kunoona kuti hapana mvura inopinda mumudziyo wedu. Chinhu chakanakisa ndechekuti kunyangwe mushandisi anoita bvunzo anopedzisa kuvhura chishandiso kuratidza kuti hapana kana chiratidzo chemvura mukati mechigadzirwa.
Uye iyo litmus test… Muvhidhiyo iyi nyowani unogona kuona muparidzi weAustralia, Samantha Clarke, achigeza paBondi Beach ine mukurumbira aine yake nyowani iPhone 7. Kufamba nepakati pemvura nemakakatanwa akasiyana neakajairika mafungu emahombekombe ayo zvakare anoratidza kuti iyo iPhone 7 ine kuramba kwakanaka kwemvura. Hongu zvirokwazvo, Ramba uchifunga kuti hapana kana maviri evhidhiyo iyo iyo iPhone inonyudza iyo iPhone kupfuura 1 mita, saka kanganwa nezvekutora yako nyowani iPhone 7 newe kune yako dive mugungwa, asi zvinoenderana nemiyedzo iri kuburitswa iwe unogona kunyarara kana iwe uchida kuyedza kutora iyo isinganzwisisike pikicha mudziva (uchifunga iyo vimbiso kubva Apple haifukidze chero nyaya nezvinwiwa).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Edza kuramba kwemvura kweiyo iPhone 7
Ungasarudza sei mudiwa Pokémon muPokémon Go